Ciidamada Booliska B/weyne oo gacanta ku dhigay mandooriye | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Ciidamada Booliska B/weyne oo gacanta ku dhigay mandooriye
Ciidamada Booliiska Maamulka Hir-Shabeelle ayaa Howlgal culus ka sameeyay Xaafadaha Magaalada Baladweyne ee xarunta Gobolka Hiiraan, howlgalkan oo ahaa mid amniga lagu xaqiijinaya ayaa laga sameeyay inta badan xafadaha baladweyne.
Howlgalka ayaa waxaa la sheegay in Ciidamada ay kusoo qabteen waxyaabaha amaanka dooriya iyo dad ka Ganacsanayay oo saraakiisha Ciidamadu sheegeen in ay ka qeyb qaadanayaan falalka amni darro. sarakiisha howgalka hogaamineyay ayaa sheegay in qamriga iyo waxyaabaha maanka doorsha
Booliska Hor-Shabeelle ayaa dhowr jeer oo hore ayaa howlgallo ay ka sameeyeen Magaalada Beledweyne iyo degaannada kale ee Hir-Shabeelle waxaa ay kusoo qabteen waxyaabaha maanka dooriya iyo dadkii ka Ganacsanayay.
Previous articleKu dhawaad 50 dhaawac ah una badnaa Ciidamo oo laga soo dajiyay Garoonka Muqdisho kadib Dagaalkii B/xaawo.
Next articleMusharax Madaxweyne Daahir Maxamuud Geelle oo ka hadlay dagaalkii B/xaawo…
Dhaq dhaqaaqyo Ciidan oo Ciidamada Dowlada ka bilaabeen Muqdisho caawa ..
Abaanduulaha Ciidamada Kenya ee ka howlgalla Soomaaliya oo Wacad ku maray...
Ciidamada Dowlada oo shabaab ku baacsaday inta u dhaxaysa Magaalooyinka Balcad...
Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden oo Dalalka saboolka ah ugu deeqay dhaqaale...
Ciidanka AMISOM ee Soomaaliya ku suganoo waqtiga loo dheereynayaa marka...